UE: Mandrahona ny satan'ny sehatra iraisam-pirenena ny lalàna vaovao fidirana ao Hong Kong
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Hong Kong » UE: Mandrahona ny satan'ny sehatra iraisam-pirenena ny lalàna vaovao fidirana ao Hong Kong
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Hong Kong • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aogositra 20, 2021
Ny fitondrana quarantine vaovao dia mety hanontany ny maro amin'ny vondrona mpandraharaha iraisam-pirenena raha te-hihidy ao Hong Kong izy ireo.
Fepetran'ny fidirana Hong Kong toughens ho an'ny mpandeha vahiny.
Tsy azo atao intsony ny mampihena ny fotoana tokony hipetrahana amin'ny quarantine.
Manaiky ny vaksinin'ny Sputnik V vita Rosiana i Hong Kong.
Frederic Gollob, filohan'ny Chambre du Commerce eropeana (ECC), nilaza fa ny lalàna henjana vaovao amin'ny fidirana ao Hong Kong dia mety hanimba ny toeran'ny tanàna amin'ny maha-ivon-toeram-piasana sy ara-bola iraisam-pirenena.
"Mino izahay fa tokony hisokatra aloha ny tanàna, raha tsy izany fitondrana quarantine vaovao izany dia mety hahatonga ny olona maro amin'ny sehatra iraisam-pirenena hanontany tena raha te-hihidy ao Hong Kong amin'ny fotoana fialan-tsasatry ny ambiny izao tontolo izao," Ptt hoy ny lohany.
Ity herinandro ity, ny Hong Kong nohamafisin'ny manampahefana indray ny lalàna momba ny fidirana amin'ny firenena. Manokana dia nofoanana ny fahafaha-mihena ny vanim-potoanan'ny quarantine raha misy fitsapana serôlôjia ho an'ny antibodies.
Rehefa mitaingina sidina ho any Hong Kong ianao dia tsy maintsy manolotra taratasy fanamarinana vaksiny ireo mpitsangatsangana, valim-panadinana ratsy ho an'ny COVID-19, natolotra talohan'ny 72 ora mialoha ny fiaingany, ary koa ny famandrihana tany amin'ny iray amin'ireo hotely natolotry ny governemanta izay misy ny fepetra momba ny quarantine. avela.
Ny governemanta Hong Kong koa dia nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny Sputnik V vita amin'ny Rosiana amin'ny lisitr'ireo vaksinin'ny coronavirus ekena ao amin'ity faritra fitantanana manokana ao Shina ity.
Ankehitriny, ny quarantine mandatory ho an'ny mponina ao an-tanàna voadona miaraka amin'ny vaksinina vita Rosiana, dia hahena 21 andro ka hatramin'ny 14 andro.